Kala duwan oo ku saabsan iPhone | Wararka IPhone (Bogga 3)
Codsiga Apple Music ee Samsung Smart TVs wuxuu muujinayaa heesaha heesta waqtiga dhabta ah
Codsiga Apple Music ee Samsung smart TV-yada, wuxuu horey u muujinayaa ereyada heesaha aan ciyaarno, sida iPadOS 14 ay sameyn doonto
Sida loo isticmaalo waxa ku cusub farriimaha ku jira iOS 14
Markan waxaan diirada saari doonaa wararka ku saabsan arjiga fariimaha ee la imaado imaatinka iOS 14 iyo dhamaan astaamaha cajiibka ah.
Koodhadhka cusub ee H.266, fiidiyow tayo sare leh ayaa lagu qaban doonaa bytes yar
Koodhadhka cusub ee H.266, fiidiyow tayo sare leh ayaa lagu qaban doonaa bytes yar. Qiyaastii laba jeer riixitaanka hadda H.265.
Ururka Dhaladka iyo Maison Kitsuné waxay ku biireen xoogag uruurinta qalabkan
NAtive Union iyo Maison Kitsuné ayaa isugu yimid uruurinta agabyo cusub oo loogu talagalay qalabkayaga oo ay jeclaan doonaan fashionistas.
Amazon Echo Auto dib u eegis: wanaagsan, laakiin leh xaddidaadyo
Waxaan tijaabinay Amazon Echo Auto cusub oo Alexa uu ku keenayo gaarigaaga, waxaanan ku tusineynaa waxa uu sameyn karo iyo waxa ugu weyn ee xaddidan ay yihiin
Waxaan sharaxaad ka bixin doonnaa waxa cadaabka ah ee VPN uu yahay iyo faa iidooyinka ay siiso isticmaale gaar ah, maahan shirkadaha oo keliya. Maxaad u isticmaali kartaa?
Hubinta Caafimaadka Batariga waxay u timaadaa Apple Watch oo leh watchOS 7
The watchOS cusub ee 7 wuxuu noo ogolaan doonaa inaan ogaano xaalada batteriga ee Apple Watch-keena mahadnaqa shaqada cusub ee Caafimaadka Battery.
Maxaa ku cusub barnaamijka Guriga
Muhiim u ah WWDC 2020: Maxaa ku cusub App-ka Guriga.
Maxaa ku cusub macruufka 14
Bandhigga Muhiimka ah ee WWDC 2020: Maxaa ku cusub macruufka 14
Xagee laga daawan karaa WWDC 2020
Raac dhacdada ugu horreysa ee WWDC 2020 oo leh iOS 14 iyo warar dheeraad ah oo toos ah oo toos loogula socdo faallo iyo dhammaan wararka Apple soo bandhigo.
Logitech StreamCam, aad u fudud oo aad u dhameystiran
Waxaan ku tijaabinay mid ka mid ah kamaradaha ugu dhameystiran suuqa, oo ay ku jiraan iskudhaf hardware-softiweer ah oo farqiga u leh tartanka
Apple wuxuu helay shati cusub oo lagu kaydiyo biyaha gali kara iPhone ama Apple Watch
Apple wuxuu helay shati cusub oo lagu kaydiyo biyaha gali kara iPhone ama Apple Watch. Nidaam lagu ogaanayo laguna eryayo qulqulka biyaha.
Ku cusub Philips Hue Line: guluub dhalaalaya, xarig cusub oo laydh cusbooneysiiyay iyo laambad cusub
Ku cusub Philips Hue Line: guluub dhalaalaya, xarig cusub oo laydh cusbooneysiiyay iyo laambad cusub. Saddex alaabood oo lagu daro noocyada Hue.
Tani waa nooca Apple ee iPhone-kiisa ugu horreeya ee la laaban karo
Jon Prosser wuxuu na siinayaa faahfaahin ku saabsan mid ka mid ah noocyada muuqaalka ah ee Apple hadda ku heli lahayd tijaabooyinka iPhone-ka soo laabanaya ee soo socda.
Apple wuxuu rukhsad u siiyaa nidaam si "loo kiciyo" meel fog oo ah selfie
Apple wuxuu rukhsad u siiyaa nidaam "ku dhajinta" sawir-qaade kooxeed meel fog. Waxaad yeelan kartaa sawir kooxeed iyadoo aysan kaqeybgalayaashu joogin.
Dhowr Dukaan oo Apple ah oo Mareykan ah ayaa noqda mural leh farriimo
Qaar ka mid ah dukaamada ayaa loo fuulay dhac iyo fariimo soo dhaweyn nabadgelyo ah oo ka yimid mudaaharaadayaasha nabada
Dhageysiga warka ayaa ku soo dhacaya Apple News + beta-kii ugu horreeyay ee iOS 13.5.5
Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 13.5.5 wuxuu muujinayaa in maqallo cusub oo loogu talagalay Apple News +, adeegga ka-qaybgalka wararka ee Apple.
Barnaamijka Dabagalka Coronavirus-ka ee Boqortooyada Midowday (UK) ayaa hayn doona Macluumaadkeena 20 Sano
Dowlado badan ayaa durbaba raadraacaya dadkooda iyagoo raadinaya Coronavirus, Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska waxay bilaabeen barnaamij u gaar ah oo keydinaya xogta muddo 20 sano ah.
Apple wuxuu sii daayaa cusbooneysiinta iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1, watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6, iyo HomePod 13.4.6
Apple wuxuu sii daayaa cusbooneysiinta iOS 13.5.1, iPadOS 13.5.1, watchOS 6.2.6, tvOS 13.4.6, iyo HomePod 13.4.6.
Jason Sudeikis wuxuu Apple TV + u keenay "Ted Lasso" oo caan ah
Jason Sudeikis wuxuu caan ku yahay "Ted Lasso" Apple TV +. Tababaraha xayeysiiska caanka ah ee NBC Sports ayaa taxane ka noqon doona Apple TV +.
Gal Gadot inuu ku ciyaaro Hedy Lamarr Apple TV +
Gal Gadot ayaa ku ciyaari doona Hedy Lamarr barnaamijka Apple TV +. Markii hore waxay ahayd mashruuc cusub oo silsiladda Showtime ah aakhirkiina Apple waxay u qaadatay bartiisa.
Dillaacyadii ugu horreeyay ee kamaradaha iPhone 13 ee aan arki lahayn 2021
In ka badan sanad ayaa naga haysa iPhone 13 laakiin maanta waxaa soo ifbaxaya ogaanshaha waxyaabaha ugu horeeya ee kamaradaha ay qaadi karto.
Tani waxay noqon doontaa xargaha maqaarka cusub ee Apple Watch
Sida muuqata Apple waxay maanka ku haysaa inay cusbooneysiiso Loop Maqaarka, oo si hufan uga mid ah xargaha ugu caansan.
UAG Scout, oo ah dhammaystirka ku habboon Faylka Keyboard-kaaga Smart-ka ah
UAG Scout waxay siisaa wax kasta oo iPad Pro's Keyboard Smart Folio ka maqan. Kiis difaac ah oo kaa qaadaya walwalkaaga.
Apple wuxuu xaqiijinayaa barnaamijka JJ Abrams 'Codka Yar ee Apple TV + bisha Luulyo 10
Apple waxay xaqiijineysaa sii deynta Codka yar ee aadka loo sugayay 10-ka July. Taxane JJ Abrams ah oo ay laxariday Sara Bareilles.
Yar yar oo ka raqiisan, sidaas ayuu noqon doonaa HomePod cusub
Riyada ah in HomePod ka raqiisan ay umuuqato mid dhow marka loo eego duruufaha jira, waxaan si dhib yar u qiyaasi karnaa bilaabida mid kale ...
Twitter-ka loogu talagalay macruufka ayaa soo bandhigi doona digniin haddii aan isticmaalno luqad aan habbooneyn
Shirkadda Twitter-ka ayaa qorsheyneysa inay fariin digniin ah ku darto dadka isticmaala ee adeegsada ereyada xunxun kahor inta aysan soo dhigin qoraal ay soo dhigayaan.
France iyo UK ayaa MAYA ku odhanaya Apple iyo Google codsi ka dhan ah COVID-19
Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa horey u sheegay inay horumarin doonaan codsiyadooda iyaga oo aan adeegsan Google iyo Apple API, taas oo sababi doonta inay si fiican u shaqeyn waayaan
Apple CarKey wuxuu noqon karaa midig geeska
Apple waxay qaadaysaa Apple CarKey tallaabo dheeri ah oo laxiriira NFC-ku saleysan sii deynta Digital Faahfaahinta 2.0 ama maamuuska
Faransiisku wuxuu diiday Apple iyo Google habka 'coronavirus-ka' hal-abuurka iyo hufnaanta leh '
Faransiisku wuxuu ku biirayaa waddamada aan adeegsan doonin Apple iyo Google ee Coronavirus meesha API inkasta oo ay yihiin kuwo waxtar leh oo hal-abuur leh.
Tani waa sida Apple u rabto inaad wax ka beddesho fariimaha ka dib marka ay diraan
Farriimaha dadka isticmaala waxay tabanayaan awoodda ay u leeyihiin inay wax ka beddelaan farriimaha, si kastaba ha noqotee, Apple waxay horay uga sii fikireysaa sida loo dhaqan geliyo.
Apple wuxuu awood u yeelan karaa Oximeter-ka Apple Watch sababo la xiriira COVID-19
Apple wuxuu awood u siin karaa cabirka mitirka 'Apple Watch' sababtoo ah COVID-19. Waxaa laga yaabaa inay noqon doonto taxanaha 6, ama watchOS soo socota ee taxanaha hadda.
Miyuu Echo Buds-ka la mid yahay AirPods? Runtu waxay tahay, maya
Miyuu Echo Buds la mid yahay AirPods? Runtu waxay tahay, maya. Way ka fog yihiin tayada ay sameecadaha dhagaha ee Apple ay bixiyaan
Sida loo daawado kulanka caadiga ah ee FC Barcelona vs Real Madrid ee ka socda iPhone ama iPad
Ciyaartii ugu fiicneyd wareega koowaad ee La Liga waa halkaan mana seegi karno hal faahfaahin ah. Sideen ku arki karnaa qadiimiga iPhone-ka
Apple waxay cusbooneysiineysaa qalabka AirPods 2 iyo AirPods Pro
Ragga ka socda Cupertino waxay cusbooneysiiyaan qalabka 'AirPods Pro' iyo AirPods 2 si loo xaliyo cilladaha yar yar ee software ee laga yaabo inay leeyihiin
Apple waxay u bilawday rukhsad sanadle ah Apple Arcade 49,99 euro
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabaan qorshe Apple Arcade sanadle ah oo aan ku keydin doonno 10 euro sanadkii, ama wixii la mid ah, laba bilood oo dhan.
Ultimate Rivals franchise wuxuu imanayaa Apple Arcade
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabeen Ultimate Rivals at Apple Arcade, ciyaarta ugu horeysa ee fiidiyowga ee xayeysiinta isboortiga oo ka bilaabata ciyaaraha xeegada.
Iyada oo macruufka 13.3 gacanta waalidka la ballaariyey
HomePod sidoo kale waxay cusbooneysiisaa iOS 13.3
HomePod sidoo kale waxay cusbooneysiisaa iOS 13.3 sida qalabka kale ee Apple
Miyaadan jeclayn Apple TV-ga fog? Waad iibsan kartaa tan Swiss-ka ah ee dhaqameed
Miyaadan jeclayn Apple TV-ga fog? Waxaad ka iibsan kartaa qalabkan fog fog shirkad internet oo dhaqameed Swiss ah iyo TV
IOS 13.3 waxay imaan doontaa 10-ka bisha soo socota ee Disembar
Munaasabaddan, wax walba waxay muujinayaan in macruufka 13.3 uu noqon doono cusbooneysiinta Kirismaska ​​ee sanad walba waxaana la heli doonaa 10-ka Diseembar.
IPhone SE 2 wuxuu ku dambeyn karaa in loogu yeero iPhone 9
Apple waxay bilaabi kartaa iPhone cusub, ka jaban guga, dhaxal u noqda iPhone SE, waxayna ugu yeeri kartaa iPhone 9.
Apple waxay cusbooneysiisaa barnaamijka Clips-ka oo noo ogolaanaya inaan adeegsanno Animojis, Memojis, iyo istiikarada
Apple wuxuu cusbooneysiiyaa barnaamijka abuurka fiidiyowga bulshada, Clips, isagoo ku daraya Animojis, Memojis, iyo istiikarada cusub ee warshad Disney ah.
IPhone SE2 Plus oo leh darajo yar 2021
Sida falanqeeye Ming-Chi Kuo uu ku sharaxay warbixin cusub, Apple wuxuu qorsheynayaa inuu soo saaro iPhone SE2 cusub sanadka 2021
Jilayaasha taxanaha «Aasaaska» ee Apple TV + waa ku dhow yahay dhameystir
Jilayaasha taxanaha cusub ee Apple soo saari doono, Aasaaska, oo ku saleysan buugaagta uu qoray Isaaq Asimov, way sii kordhayaan oo waxay ku dhow yihiin inay xirmaan.
CarPlay waxay ku kacaysaa 110 euro sanadkii milkiilayaasha BMW
BMW mar dambe macaamiisha kama qaadi doonto lacag gawaaridooda ah isticmaalka CarPlay. Kharash 110 euro sanadkii ah oo aan wax macno ah samaynaynin
Booliisku waxay qabtaan tuugada Apple Watch maxaa yeelay milkiilaheeda ayaa ka yeera
Booliisku waxay qabtaan tuugada Apple Watch maxaa yeelay milkiilaheeda ayaa ka yeeraya bartanka baaritaanka mootada laga shakiyo.
Iphone iphone-ka 2020 waxaa ku jiri kara aaladda sawirka faraha ee Qualcomm
Apple waxay mar kale ku dari kartaa dareeraha faraha ee iPhone-ka soo socda, oo ku dhexjira shaashadda iyo tiknoolajiyada Qualcomm
iFixit wuxuu sharxayaa sida badhanka kamaradda Kiiska Smart Battery uu u shaqeeyo
Ragga jooga iFixit way diidi kari lahayeen inay falanqeeyaan iPhone 11 kiiskeeda batteriga caqliga badan oo ay na tusayaan sababta ay u leedahay badhan gaar u ah kamaradda.
Sawirka Pixelmator, waa bilaash wakhti aad u kooban
In kasta oo illaa Jimcaha soo socda, Jimcaha Madow aan si rasmi ah loo xusin, haddana inbadan ayaa ah shirkadaha bilaabay inay ...
MacX DVD Ripper Pro - Rip DVD si MP4 ah si fudud (500 ruqsadaha maalinlaha ah)
Haddii aad rabto inaad hesho liisanka bilaashka ah si aad u isticmaasho MacX DVD Ripper Pro oo aad DVD-yadaada ugu jeexjeexdo MP4, kaliya sii wad inaad halkan gasho oo aad raacdo tallaabooyinka
Apple waxay soo bandhigtay xayaysiin loogu talagalay 'Truth Be Told', oo ah TV-ga cusub ee Apple TV + ee ay la socdaan Octavia Spencer iyo Aaron Paul
Wiilasha Cupertino waxay soo bandhigaan baraha loogu tala galay 'Truth Be Told', Apple TV-ga cusub + oo ay la socdaan Octavia Spencer (Maids and Ladies) iyo Aaron Paul (Breaking Bad).
Xayeysiiska Kirismaska ​​ee Apple waa halkan waana farxad
Waxay ku dhacdaa Apple sida Coca-Cola, inta badan ogeysiisyadeeda ku saabsan taariikhaha gaarka ah waxay u abuuraan farxad gelinta iyo ...
Apple ayaa bilaabay soo saarista iPhone XR gudaha Hindiya
Apple waxay u aragtaa suuq aad u xiiso badan Shiinaha, gaar ahaan marka laga hadlayo faa iidadiisa dhaqaale, laakiin arimuhu way is badaleen ...
Tijaabinta IKEA HomeKit oo leh nalalka Tradfri
Waxaan tijaabinay qalabyada IKEA Tradfri ee la jaan qaadaya HomeKit, qaabeynta iyo hawlgalkooda barnaamijka otomaatiga guriga Apple.
Websaytka Apple ma sii muujinayo dib u eegista macaamiisha ee alaabada
Apple waxay tirtirtay qiimeyntii ilaa iyo hada ay na tustay dhamaan badeecooyinka ay noogu soo gudbiso Apple Store khadka tooska ah.
Kaftanka ayaa u adeegsada Airpod-ka sidii khiyaano
Markii aan caruurta nahay waxaan sameyn jirnay kaftan aan waxba galabsan oo aan ku qoslayno dadka meesha marayay. Kaftan caadi ah (in ...
Batteriga Smart-ka ee loogu talagalay iPhone 11 Pro Max wuxuu ku darayaa badhan u heellan inuu ku furo kamaradda
Kiiska Smart Battery Case ee labada iPhone 11 iyo iPhone 11 Pro Max oo leh badhan u heellan kamaradda ayaa hadda laga heli karaa Apple Store
Minecraft Earth ee macruufka ayaa hadda la heli karaa
Minecraft Earth ee macruufka hadda waxaa laga heli karaa Isbaanish, nooc hore oo marin-u-hel ah (pre-final) laakiin si buuxda loo ciyaari karo oo shaqeynaya.
Elago waxay soo bandhigeysaa kiiska cusub ee iPod-ku dhiirrigeliyay AirPods
Haddii aad rabto kiis asal ah si aad u ilaaliso kiiska amarkaaga ee AirPods, Elago wuxuu na siinayaa mid leh naqshad u eg iPod-kii asalka ahaa.
Haddii aad rabto inaad ka hor istaagto Machadka Qaranka ee Tirakoobka inuu helo booskaaga terminal iyo inuu ogaado meesha aad u safreyso maalmahan, waa tan sida looga fogaado.
Apple wuxuu ka saarayaa App Store in ka badan 180 codsi oo la xiriira "uumiga" sigaarka elektarooniga ah
Cilmi-baarista Apple waxay daah-furtay daraasado cusub oo ku saabsan maqalka, wadnaha, dhaqdhaqaaqa iyo caafimaadka haweenka ee Maraykanka
Apple waxay ku fikireysaa inay isku xirto dhowr adeegyadeeda xirmo wadajir ah. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa Apple TV +, Apple News + iyo Apple Music
Apple waxay maalgashan laheyd ilo si loo wanaajiyo loona ballaariyo shaqadeeda weyn ee HomeKit iyo dhamaan qalabkeeda la jaan qaada.
Waxaan ku tusineynaa tabaha ugu wanaagsan ee lagula macaamilayo iOS 13 sida khabiir oo aan ku fadhiyin cinwaano waaweyn dib u eegista.
Macluumaad cusub oo ku saabsan muraayadaha xaqiiqda ah ee la kordhiyay ee laga helay Apple waxay muujinayaan in aynaan arki doonin illaa 2022 waxaanna arki doonnaa kuwa cusub 2023
Roku wuxuu bilaabi doonaa codsi loogu talagalay Apple Watch kaas oo noo oggolaan doona inaan ku maareyno qalabka iyada oo loo marayo curcurkayaga oo leh amarrada codka.
Hadda Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 13.1.3 sidaa darteed ma awoodi doontid inaad hoos u dhigto nooc kasta oo ka mid ah iOS 13.2, dib uma laabaneyso.
Toddobaadyadii la soo dhaafay, wax badan ayaa laga yiri shaqada degdegga ah ee ay iOS ku qabanayso codsiyada xiritaanka asalka ...
Maamulaha guud ee Apple wuxuu rabaa inuu cadeeyo in AirPods Pro uusan badali doonin AirPods caadi ah, laakiin ay yihiin kaabis.
Adobe ayaa sii deysay Photoshop oo loogu talagalay iPad-ka. Waxaan hadda ka soo dejisan karnaa nooca desktop-ka tifaftiraha caanka ah ee Adobe sawirada iPads-ka.
Kudar kumanaan nooc oo ah iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga adoo adeegsanaya barnaamijka Adobe Creative Cloud. 1.300 nooc oo bilaash ah iyo 17.000 haddii aad kamid tahay qorshaha Adobe
Xanta tilmaamaysa xiisaha Google ee Fitibt ayaa ugu dambeyn si rasmi ah loo xaqiijiyay iibsiga kan dambe ee Alphabet ayaa lagu dhawaaqay.
Qaar ka mid ah nashqadihiisu durba waa kuwa xun, tusaalaha ugu dambeeyay waa Xiaomi Mi Watch, saacad u eg sida ay tahay, Apple Watch "jaban".
Barnaamijka lacag-bixinta wireless-ka ah ee Apple, Apple Pay, wuxuu ku guuleystey inuu dhaafo Starbucks oo ah kan ugu isticmaalka badan dhanka mobilada Mareykanka gudihiisana leh 30 milyan oo isticmaale.